Faahfaahin ku Saabsan Shaqaalihii MSF ee lagu Afduubay Dalka Kenya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Shaley oo khamiis ahayd, taariikhduna aheyd Oktoobar 13, koox ka tirsan MSF ayaa lugu weeraray Dhadhaab, Kenya. Mid ka mid ah darawallada MSF, Maxamad Xasan Boorle, oo 31 jir ah, ayaa lagu dhaawacay weerarkan; xaaladdiisa caafimaad ayaa ah mid deggan, khatar kuma jiro, cusbitaalka ayuuna jiifaa. Laba ka mid ah shaqaalaha caalamiga oo u dhashay dalka Spain ayaa la afduubay. Ilaa iyo hadda, MSF uma suuragelin in ay la xiriiraan labadaasi shaqaala ee laafduubay. Koox maamusha arrintan deg degga ah ayaa la sameeyey.
Labadaas shaqaale oo u dhashey dalka Spain ayaa kala ah Montserrat Serra, oo 40 jir ah, kana soo jeedda, Girona (Palafrugell) iyo Blanca Thiebaut, oo 30 jir ah, kana soo jeedda magaalada Madrid. Labadooduba waxaa ay u shaqeeyaan kooxda MSF ee xerada qaxootiga ee Dhadhaab. Qoysaskooda waa la ogeysiiyey afduubka loo geystey. MSF waxaa ay uga yeereysaa dhammaan warbaahinta in ay ixtiraamaan qoysaska la-haystayaasha oo aaney wakhtigaan adag soo bandhigin macluumaadka shaqsiga ah ee labadaas la hayste.
“Waxaa aan mar walba la xiriirnaa qoysaska asxaabteena iyo dhammaan maamullada uu arrinkan khuseeyo tan iyo bilowgii. Waxaa aan sameyneynaa dadaal walba oo aan iyagoo nabad qaba aan dib ugu soo celin karno. Waxaa aan taageereynaa iyaga iyo qoysaskooda “, ayuu
yiri José Antonio Bastos, oo ah Madaxweynaha MSF, dalka Spain.
Weerarkan waxaa uu saameynayaa howlaha samafalka ee loo fidinaayo kumanaanka qof kuwaas oo u baahan gargaar bani’aadamnimo
oo degdeg ah. Waxaa loo baahanyahay xal degdeg ah oo xaaladdaan looga gudbo.
Dhacdadaan waa in si taxaddar leh loo xaliyo. Si loo helo xalka ugu wanaagsan sida ugu dhakhsiyaha badan, MSF haatan ma bixineyso
macluumaad dheeri ah mana ka hadli doonto warbixinada iyo macluumaadka guud ee la xiriira arrintan.
MSF waxaa ay sidoo kale ka codsaneysaa dhammaan dhinacyada uu arrinkan khuseeyo in ay ka fogaadaan in ay arrintan ka hadlaan
gaar ahaan macluumaad ay u soo bandhigaan umadda. “Sida ay hadda dhacdadan u faaftay ma aha qaab xal aan ku heli karno, laakiin waxaa ay wax u dhimi kartaa qoysaska waxaana ay hakadna gelin kartaa dadaalada aan dib ugu heli lahayn asxaabteena”, ayuu yiri Bastos.
Tags: dadaab, kidnapping, MSF, MSF Staff abducted, refugee camp, Somalia, Victims of Violence